1. ISebe leMfundo leNtshona Koloni (iWCED) liya kukhupha iZintlu zeZithuba ezi-4 ngo-2013 zootitshala abasezikolweni.
2. Imihla yopapasho lweZintlu zeZithuba, kwakunye neminye imihla ebalulekileyo, ikwesi sihlomelo siqhotyoshelwe apha.
3. ISebe iWCED alisayi kuba neZintlu zeZithuba ezahlukeneyo zamanqanaba ezithuba ahlukeneyo. Zonke izithuba zootitshala ezingenamntu kufuneka ke ngoko zipapashwe kwiZintlu zeZithuba ngokukhawuleza kangangoko.
4. Kuya kuvunyelwa ukupapashwa kwezithuba zamaSekela-nqununu nezeeNqununu xa kukho imfuneko yoko naphantsi kweemeko ezizodwa. Ezi zithuba ziya kupapashwa kwiZintlu zeZithuba eziZodwa kwakubakho imfuneko yoko.
5. Ziyacelwa iinqununu namabhunga olawulo ezikolo ukuba zincede ziqinisekise ukuba izithuba ezipapashiweyo zizaliswa ngokusebenzisa ikhompyutha kwidrafti yeZintlu zeZithuba kweli ziko lewebhu http://wced.school.za ngomhla ezilindeleke ngawo onikiweyo. Akukho zifom zibhalwa ngesandla emaphepheni ziya kwamkelwa. Iinqununu mazithetha-thethane nabaphathi beekomiti zeesekethe bazo ukuba zineengxaki ekuzaliseni izaziso zezithuba ezipapashwe kwiZintlu zeZithuba eziyidrafti kwiziko lewebhu.
6. Izicelo mazingeniswe ngohlobo oluchazwe kwisandulela soLuhlu lweZithuba ngalunye. Izicelo mazingeniswe ngekhompyutha, kusetyenziswa i-e-Recruitment System for Educators: "Recruiting the Best".
7. Ezi Zintlu zeZithuba ziya kuthunyelwa yiRejistri yeSebe iWCED, zize zibe nako ukufundwa kwiZiko leWebhu apha http://wced.school.za, Klikha ku-"vacancies" kwi-home page yeziko lewebhu ukufikelela kwi-e-Recruitment System for Educators.
8. Intsebenziswano yabo bonke abachaphazelekayo iya kuqinisekisa ulawulo ngempumelelo lwenkqubo yokuqesha kwaye iya kuthakazelelwa kakhulu.
IMihla yeZintlu zeZithuba ngo-2013 (ubukhulu: 23 KB)